Gabdho Soomaali ah oo Horey ugu Biiray ISIS oo Doonay in ay dib ugu soo laabtaan England – Radio Daljir
Maajo 14, 2015 10:01 b 0
Khamiis, May 14, 2015 (Daljir) — labo gabdhood oo walaalo ah o Soomaali ah horeyna ugu biiray kooxda Daacish ayaa sheegay inay hadda doonayaan inay kooxdaas ka baxaan oo ay dib ugu laabtaan dalka Ingiriiska oo ay markii hore ka yimaadeen.
Labadaan gabdhood oo la kala yiraahdo Salma iyo Sahro Xalane oo mataano 17 jir ah ayaa la sheegay inay hadda baxsad ka yihiin raggii guursaday ee Daacish ka tirsan waxaana ay doonayaan inay Ingiriiska dib ugu laabtaan.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa hadal haysa in gabdhood ay xiriir la sameeyeen waalidiintood oo degen magaalada Manchester waxaana ay u sheegeen inay doonayaan inay iskaga baxaan kooxda Daacish.
Aabaha gabdhaan oo la yiraahdo Ibraahim Xalane ayaa u sheegay wargeyska The Sun ee Ingiriiska kasoo baxa in gabdhahiisa ay lasoo xiriireen una sheegeen inay wax badan iska badaleen fikirkii ay qabeen doonayaana hadda inay u laabtaan Ingiriiska.
Sidoo kale mas’uul ka tirsan guddiga bulshada Soomaalida ee Manchester degen ayaa u sheegay wargayska kale ee Daily Mail inay isku diyaarinayaan sidii gabdhahaas Ingiriiska logu celin lahaa oo ay ehelkooda dib ula midoobi lahaayeen.
Wararku waxay sheegayaan in labadaan ay ku dhuumaalaysanayaan xadka u dhaxeeya Ciraaq iyo Turkiga oo ay doonayaan inay dhanka Turkiga u gudbaan.Wariye magaciisa qariyay oo ku sugan magaalada Musil ayaa sheegay in labada gabdhood la badigoobayo haddii la qabtana ay la dilayo.
Xog’hayaha arrimaha gudaha Ingiriiska haweeneyda la yiraahdo Theresa May oo la hadlaysay barnaamij ka baxa TV la yiraahdo ITV ayaa sheegtay in xukuumadda Britain ay waqti badan galinayso sidii dadka Ingiriiska ah ee dibadaha u aaday ku biiritaanka kooxaha xag jirka ay dalka dib ugu laaban lahaayeen.
Theresa May waxay sheegtay inay la kulmeen qaar ka mid ah bulshada Soomaalida oo ay arrimaha gabdhahaan kala hadleen.
Hay’adaha amaanka Britain ayaa aaminsan in gabdhahaas looga dhaadhiciyay fikirka Daacish baraha bulshada waxaana sabab u ah walaalkood la yiraahdo Axmed oo horey kooxdaas ugu biiray.